अन्तर`जातीय बिहे गरेको जोडी २१ दिनदेखि जंगलमा, सहयोग माग्दै गरे भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
July 9, 2021 264
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा जेवी विश्व`कर्माले एउटा भिडियो सार्वज`निक गरेका छन् । जसमा एक जोडीले आफुहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गरिरहेका छन् ।
आफुहरुले अन्तर`जातिय विवाह गरेको र परिवारका सदस्यले नअ`पनाएका कारण जंगलमा आएर बस्नुपरेको बताएका छन् । भिडियोमा बोल्नेहरु कैलालीको भजनी नगरपालिका–४ झलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावल हुन् ।
उनीहरुले आफ्नो खुसी`ले विवाह गरेको भएपनि परिवारका सदस्यले ध म्की दिएका कारण जंगलमा बस्नुपरेको बताएका छन् । भिडियोमा कुन जंगल उल्लेख नगरिएको भएपनि भजनीको जंगल भएको हुन`सक्ने अनुमान गरिएको छ । ट्वीटरमा अपलोड गरिएको भिडि`योमा युवकले आफुहरु`लाई रुकुम घटना दो`होरिन सक्छ भनेर चेतावनी आएका कारण डर लागेको बताएका छन् ।
युवतीले पनि जिवन रक्षाको लागि भि`डियो सार्व`जनिक गर्न बाध्य भएको बताएकी छन् । प्रकाशको आफन्तले दिएको जानकारी गराउँदै अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले सो भिडियो आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट पोस्ट गरेका छन् ।
भिडियो`मा प्रकाशले विवाह गरेपछि परिवारले नमानेको हुनाले जङ्गलमा आउनु`परेको बताएका छन् । माल`तीले भनेकी छिन्–‘हामीलाई धम्की दिएका छन् ।’ दम्पतीले आफू`हरूले प्रेम गरेर विवाह गरेको र मालतीको पेटमा बच्चा भएको उल्लेख गर्दै टाढा हुन नचाहेको बताएका छन् ।
विवाह गरे`लगत्तै युवतीका आफन्तले युवक`लाई मा’रि’दि’ने, घर ज’ला’ई दिने चेतावनी दिएपछि उनीहरु जंगलमा बस्न बा’ध्य भएका हुन् । युवतीका आफन्तले रुकुम ह’त्या’का’ण्ड’ज’स्तै मा’रिदि’ने चेतावनी दिएपछि युवक त्र’सित भएका हुन् ।
Prevचाँदीको बालाको लोभले जामुन खान जाउँ भन्दै दिदिले गरिन् ३ वर्षीय भाईको ह`त्या
Nextगरिमा शर्मा र दुर्गेश थापा पूरा लाईभ भिडियो यस्तो रहेछ, गरिमाले पोस्ट गरिन् पूरा भिडियो
रमेश प्रसाई’को लागि टिका सानुले गाईन् यस्तो गीत, इन्द्रेणी’मा लाईभ दोहोरी गाउँदै (भिडियो सहित)
६१ वर्षकी आमाले जब आफ्नै छोराको सन्तान जन्माएर हजुर-आमा बनेपछि
आज उपत्यकाका यि – यी स्थानमा बत्ति जाने ! हेर्नुहोस्
‘नचाहँदा-नचाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो’ भन्दै गायिका टिका सानुले लेखिन् मार्मिक स्टाटस !
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132723)